Herinandron’ny kabary: hotanterahina amin’ny “zoom” sy “FB” ny hetsika | NewsMada
Herinandron’ny kabary: hotanterahina amin’ny “zoom” sy “FB” ny hetsika
Raha ny fandaharam-potoana sy fikasana, any Antsirabe no tokony hanatontosana ny “Herinandron’ny kabary”, ny 9 ka hatramin’ny 15 aogositra izao. Tsy ho tanteraka anefa izany, noho ny fisian’ny valanaretina covid-19 sy ireo fepetra tsy maintsy hajaina hoenti-miady aminy. “Manasa antsika ary hianoka ny “Herinandron’ny kabary” 2020, amin’ny alalan’ny “zoom” sy “facebook” ”, hoy ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy maneran-tany.
Ny alahady 9 aogositra izao, manomboka amin’ny 4 ora tolakandro (ora eto Madagasikara), fanokafana ny hetsika, arahina mivantana amin’ny “zoom” sy ny “facebook”. Manomboka ny alatsinainy 10 aogositra ka hatramin’ny zoma 14 aogositra, isaky ny amin’ny 8 ora alina ka hatramin’ny 9 ora alina ny seho kanto ataon’ny isam-paritany. Hanasana ny rehetra io. Hisy ny lalao isan-karazany hahazoana fanomezana. Ny tontolo andro kosa, fampirantiana , kabary, ohabolana, hainteny, sns.
Ny asabotsy 15 aogositra, manomboka amin’ny 2 ora ka hatramin’ny 4 ora tolakandro, atrikasan’ny fampianarana ho an’ny mpampianatra kabary. Manomboka amin’ny 4 ora tolakandro kosa, fivoriana ara-potoana ho an’ny antenimiera foibe Fimpima maneran-tany.
Ho an’izay mampiasa ny “zoom”, afaka miditra amin’ny ID: 818 425 1442; Ho an’ireo mananany kaonty “facebook” kosa, afaka manaraka sy mandray anjara amin’ny “Herinandron’ny kabary” amin’ny “Fikambanan’ny mpikabary malagasy”.